I-Wholesale XGEAR Pop Up Canopy Tent 10′x10′, Ukusetha Kalula Nesitoreji, okuhlanganisa Ukukhiqizwa Kwesikhwama Esithwala Amasondo Nefektri |XGEAR
I-XGEAR Pop Up Canopy Tent 10′x10′, Easy Set Up and Storage, okuhlanganisa iWheeled Carry Bag
Itende le-XGEAR Pop Up Canopy 10' x 10' lakhiwe ngensimbi nensimbi.Uhlaka alukwazi ukugqwala futhi luvalwe ngempushana, okwenza i-pop up canopy ihlale isikhathi eside, iqine futhi iphephe.
Yisebenzise nomaphi lapho ufuna.Kusukela kumapikiniki, amaphathi, uhambo lokukhempa, imisebenzi yepaki, ukuya ezimakethe zabalimi, amabhizinisi amancane nokunye, le canopy izosebenza kahle futhi inikeze indawo enkulu yomndeni wakho nabangane.
● I-10x10 i-canopy esheshayo ihlinzeka ngamamitha-skwele angu-100 omthunzi kubantu abangu-15, emikhulu kunamakhenopi amaningi angaphandle.Indawo enkulu enomthunzi yemakethe yezeze, iphathi, ibhishi, ibhizinisi, imisebenzi yomphakathi nanoma yikuphi ukusetshenziswa kwangaphandle.
● Ngohlaka Lwe-One-Piece oluhlanganiswe ngokugcwele ku-gauge ephezulu eqinile, ama-canopies e-XGear amiswa ngamasekhondi ngaphandle kwamathuluzi adingekayo.Thatha ifreyimu ehlanganiswe ngokugcwele nephezulu ngaphandle kwesikhwama, donsa uvule, welule imilenze futhi usuqedile.
● Inikeza isivikelo esihle eLangeni, Umoya, Imvula nezinye izimo zezulu.Ukwakhiwa kwekhwalithi Kohlaka Lwensimbi Oluhlanganiswe Ngempushana kanye Nekhava Ye-Canopy Ehlala Njalo: Ingaphezulu le-canopy lenziwe ngendwangu enemibala esiliva, livimba u-99% wemisebe eyingozi ye-UVA ne-UVB ekukhanyeni kwelanga, engavimbeli Amanzi futhi yahlala isikhathi eside ukusetshenziswa.I-Arch top to against amanzi iqoqa;ngokuma izimo ezinomoya ngokuvikeleka kwemigqa emi-4 yokubopha kanye nezigxobo zensimbi ezingu-8 (ungakushiyi esimweni sezulu esibi).
● Kufaka i-canopy top engu-1, izintambo ezingu-4x, isikhwama sesiteki esingu-1 esinezikhonkwane ezingu-8, uhlaka nesikhwama sokuthwala esinamasondo.
Indaba Eyinhloko I-polyester yesiliva ye-UV
Umbala Okumpunga Okumnyama/ Okuluhlaza/ Oku-beige/ Isiliva/Okuluhlaza okwesibhakabhaka
Ubukhulu bento L120 x W120 x H111 amayintshi
Isisindo sento 19.25KG
Usayizi webhokisi L50x W11 x H9 amayintshi (1pc/box)
IkhathoniGros Isisindo 20KG
● Ukufakwa kwesiliva kwe-UV ngemuva kwendwangu kunikeza ukuvikelwa kwe-UPF 50+, futhi isakhiwo sizinzile.
● Iyaphatheka futhi kulula ukuyihambisa ngokuyipakisha esikhwameni sethu esisindayo kakhulu esinamasondo ahlelekile nezibambo zesikhumba.
● Umklamo womlenze oqondile unganikeza isikhala esiningi.
Kulula ukuyisetha nokugcinwa, futhi ilungele ukusetshenziswa ngaphandle:
Ikonapilungele imidlalo yangaphandle, umcimbi, umkhosi, imakethe yezeze, iphathi, ibhishi, inkundla yokudlala.
Futhi kuhle izivande zakho, amagceke, ama-patios,ohambo lwe-RV namapikiniki.
Sicela uphakamise ukungeza yethuI-Mesh Screen Zippered Wall Panels ukugwema ukukhathazeka omiyane, futhi uthole indawo enethezekile.
Okwedlule: I-Speed ​​Agility Training Setha nge-TPE Ladder ukuze uthole ukuqina nokuqeqeshwa kwebhola
Olandelayo: I-XGEAR Low Seat Lightweight Folding Beach Chair ene-High Back Mesh Back